Mpianatra Onivesite Sangany Japoney Voaheloka Noho Ny Herisetra Ara-nofo, Sazy Miantona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2016 6:56 GMT
Auditorium Oniversiten'i Tokyo Yasuda ．Sary avy amin'ilay mpisera Flickr, Bi-Yu Wu．(CC BY-NC-ND 2.0)
Manome topi-maso amin'ny toe-tsain'ny Japoney momba ny fananahana, ny saranga sy ny tombondahiny, ary ny herin'ny fomba amam-panao ara-kolontsaina naharitra vanim-potoana lava ny didim-pitsarana vao haingana nomena ny vondrona lehilahy voaheloka ho “vondrona mpanao herisetra ara-nofo”.
Nomen'ny Fitsarana ao amin'ny Distrikan'i Tokyo sazy mihantona tamin'ny Talata 22 Septambra 2016 teo ny roa tamin'ireo lehilahy voaheloka ho miherisetra ara-pananahana (fantatra amin'ny hoe fanaovana zava-mahamenatra any amin'ny seha-pitsarana sasany), raha toa ka mbola miakatra fitsarana kosa ny fahatelo voalaza fa mpiray tsikombakomba. Niteraka resabe sy adihevitra mafana tao amin'ny aterineto ny sazy mihantona ho an'i Matsumi Kensuke sy Komoto Taichi, izay samy mpianatra ambaratonga voalohany ao amin'ny oniversite malaza indrindra ao Japana.
Voampanga ho mitarika andian-jatovo miisa dimy ao amin'ny Oniversiten'i Tokyo i Kensuke, mpianatra 22 taona, nihetraketraka nametaveta mpianatra vehivavy avy ao amin'ny oniversite iray tsy dia malaza rehefa avy nanome zava-pisotro mahamamo azy.
Voampanga ary avy eo notsaraina ho nihetraketraka amim-pametavetana tovovavy iray tamin'ny andron'ny 11 May 2016 ireo mpikambana ao amin'ny “Vondrom-pikarohana momba ny Tsingerintaona ao amin'ny Anjerimanontolon'i Tokyo” (东京 大学 诞生 日 研究 会). Nosamborina ireo lehilahy rehefa nandositra sy niantso polisy ilay lasibatra.
Naorina toy ny “faribolana”, na klioban'ny oniversite ny vondrona, ary nanana ny Twitter-ny manokana izay efa voafafa taorian'ny zava-nitranga
Pikantsarin'ny pejy Twitter efa tsy misy intsony “Vondrom-pikarohana momba ny Tsingerintaona ao amin'ny Oniversiten'i Tokyo”. Sary niparitaka be tao amin'ny media sosialy.
Fantatra fa anisan'ny mpitarika, nijoro vavolombelona tao amin'ny fitsarana i Matsumi fa nahatsiaro afaka manao herisetra tamin'ilay vehivavy satria mijery azy toy ny “ambany ara-tsaina” noho izy mandrato fianarana any amin'ny oniversite hafa tsy Anjerimanontolon'i Tokyo. Malaza ho “Todai”, anisan'ny oniversite tsara laharana hatrizay izy io, ary matetika lasa sangany eo amin'ny fiarahamonina Japoney ireo nahazo diplaoma tao.
Mampiasa ny lojika amin'ny filaharan'ny oniversite, saika ny olon-drehetra eo amin'ny fiarahamonina Japoney no heverin'ireo mpianatra nivoaka ho Todai fa “ambany”. Ahitana ny oniversite tsy miankina sy miankina ny rafi-pianarana ambony ao Japana. Misy ny fifaninanana lehibe hidirana any amin'ny oniversim-panjakana sasany, indrindra fa ny Anjerimanontolon'i Tokyo. Raha takatry ny fahefa-mividy ny saram-pianarana amin'ny ankapobeny, misy ny fitsapam-pahaizana ara-panjakana sarotra dia sarotra eo amin'ny sehatra nasionaly hidirana ao amin'ny Anjerimanontolon'i Tokyo, sy fanadinana sarotra kokoa karakarain'ny oniversite mihitsy. Heverina toy ny “tsara indrindra amin'ireo tsara indrindra” ny mpianatra afa-panadinana sy voaray hianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Tokyo, ary afaka hitantana governemanta sy orinasa.
Na dia voampanga noho ny heloka bevava lehibe aza, dia tafavoaka mora tamin'ny fahazoana sazy mihantona ireo lehilahy satria nandoa onitra tamin'ny fianakavian'ny niharan'ny herisetra, ary niala tsiny mivantana sy naneho fanenenana tao amin'ny efi-pitsarana
Araka ny filazan'i Shusuke Murai, mpanoratra ao amin'ny Japan Times, izay nitatitra ity didim-pitsarana ity:
Nilaza ny filohan'ny mpitsara Hajime Shimada fa mendrika fanamelohana goavana ny voampanga satria tsy nohajainy ny lasibatra. Nanohy nilaza ny mpitsara, na dia izany aza, fa misy ny toerana ho an'ny fanarenana satria naneho fanenenana noho ny zava-bitany ilay mpianatra
Misy lanjany lehibe mandritra ny fotoam-pitsarana Japoney ny fialan-tsiny avy amin'ny fo. Tamin'ny fiandohan'ity Septambra ity, nesorina ny fanamelohana ilay mpilalao sarimihetsika Japoney niherisetra ara-nofo tamin'ny mpiasan'ny fandraisam-bahiny iray rehefa nifona ilay mpilalao sarimihetsika sy ny reniny (izay olo-malaza ihany koa).
Mikasika ny raharaha momba ny mpianatry ny anjerimanontolo, nilaza ireo voampanga izay efa voaheloka fa nanakona ny fahaiza-mamakafaka tao amin'izy ireo ny toaka – saingy tsy ny rehetra no resy lahatra amin'ny fanamarinan-tena:
Tsy mino aho fa tonga amin'ny fialan-tsiny ratsy tahaka izany i (Matsumi Kensuke).
Lohateny: Naneho nenina, sy mampanantena tsy hisotro toaka intsony ny voampanga. Roa-taona an-tranomaizina, sazy mihantona efa-taona.
‘Hita fa meloka ilay nitarika ny herisetra ara-nofo avy ao amin'ny vondron'ny Oniversiten'i Tokyo, voasazy (avy amin'ny TBS Broadcating)
Hita fa meloka noho ny herisetra ara-nofo tamin'ny mpianatra ambaratonga voalohany ireo mpianatra telo ao amin'ny taona fahatelon'ny Anjerimanontolon'i Tokyo.
Mitovy amin'ny fanaon'ireo “klioba”-n'oniversite “Super Free”, izay nanatontosa fanolanana kapo-dahy teo anelanelan'ny taona 2002 sy 2003 ny nataon'ireo vondrona. Nosamborina tamin'ny 2003 ny filohan'izany klioba izany – mpianatra ambaratonga voalohany tao amin'ny Waseda, oniversite sangany iray hafa ao Tokyo – ary nahazo sazy henjana hatramin'ny 12 taona an-tranomaizina.
Tsy tahaka ity zava-nitranga farany ity, izay toa voafetra tamin'ny herisetra ara-nofo tokana, nanomana antsakany sy andavany sy nampiasa fomba mahomby tamin'ny fanatontosana ny herisetra ara-nofo tamin'ny alalan'ny fanomezana rongony ho an'ireo tovovavy marobe nandritra ny fety sy lanonana amin'ny alina ny “Super Free”.
Mateti-pitranga ao Japana ny fikaotina vehivavy amin'ny zava-pisotro na fanomezana rongony azy ireo mba hanamorana ny herisetra ara-nofo. Tamin'ny tranga 2014, nanome rongony ho an'ireo mpianatra vehivavy izay torana teny an-dalana ireo mpianatra avy amin'ny anjerimanontolon'i Meiji Daigaku.
Ho fanoherana izao toe-javatra izao, nahasanganehana ireo mpanara-baovao marobe ny sazy mihantona ho an'ireo lehilahy avy ao amin'ny Anjerimanontolon'i Tokyo:
“Ao amin'ny vondrona mpiherisetra ara-nofo iray, hita fa meloka ny mpitarika ny Todai’
Nampanantena tsy hisotro toaka intsony i Matsumi, toa tahaka ny manome tsiny ny toaka izy.
Mampanantena tsy hisotro toaka intsony mandritra ny androm-piainany izy? Tsy tokony nanao izany izy satria hanara-maso azy ny rehetra ao Japana. Saingy ho voatsabo amin'ny maha mpiondana fametavetana tafahoatra azy ve izy? Tokony navelantsika ho votsotra tokoa ve ity jiolahimboto ity?
Mandritra izany, tsy fantatra anarana ilay mpitory ny herisetra, ka nahatonga ny mpisera Twitter iray hanamarika hoe:
Ny antony mahatonga ireo heloka bevava miverimberina ireo dia satria tehamaina eo amin'ny hato-tanana no hany mba sazy. Ka mety hitranga foana ny heloka bevava mitovy amin'izany. Raha tsy manafina ny anarany sy ny tarehiny izy ireo, tsy afaka manantena hiverina amin'ny fiainan'izy ireo taloha intsony sy hanasitrana ny vatana sy ny fanahiny ireo vehivavy niharan'ny herisetra.
(Lohateny mifandraika amin'ny lahatsoratra):
Mpianatra voaheloka noho ny herisetra ara-nofo tamin'ny vehivavy ‘ambany ara-tsaina’.
Nanao fikarohana kely ny vondrona bilaogim-baovao Kuroshi Sokuho (黒 子 速 報, “Ambadiky ny Seho Tselatra Vaovao”), ary nitatitra fa mety nandray anjara tamin'ny fanamaivanana ny didim-pitsarana maivana ny fahafantaran'ny fianakavian'i Matsumi Kensuke olona:
Iray amin'ireo sangany, nahazo diplaoma tao amin'ny sampana lalàna Oniversiten'i Tokyo ny rain'i Matsumi, izay miasa ho tale ara-pitantanambolan'ny fampiasam-bola amin'ny “megabank” iray
Raha marina, dia afaka niantehitra tamin'ny tambajotran'ny tovolahy taloha ahitana olom-pantatra manana tara-pahefana ireo tovolahy voaheloka tamin'ny herisetra ara-nofo tamin'ity raharaha ity ka nanamaivana ny sazy.
Ny fanomezan-tsiny ny niharam-boina – mety nandray anjara tamin'ny fahazoan'ilay lehilahy sazy mihantona ihany koa ny fihetsika ara-kolontsain'ilay tovovavy nidi-kizo nanaiky an-tsitrapo hiditra ao amin'ny tranon'i Matsumi (zavatra izay ampitandremana ny vehivavy tsy ho atao mihitsy, raha tsy hoe te hiray ara-nofo izy ireo).
Araka ny filazan'ny Biraon'ny Firenena Mikambana misahana ny Rongony sy ny Heloka Bevava, ahitana tranga herisetra ara-nofo (fanolanana) 1,2 amin'ny olona 100.000 i Japana tamin'ny 2014, raha oharina amin'ny 28,6 amin'ny olona 100.000 ao Etazonia. Ahitana taha faran'izay ambany amin'ny heloka bevava kosa ny firenena Azia Atsinanana, misy ny fanahiana fa zara raha misy mitory ny raharaha herisetra ara-nofo.